Articles tagged 'zimbabwe cricket'
Cremer halts career 12 January 2019 HARARE - Leg-spinner Graeme Cremer has jumped out of the Zimbabwe Cricket (ZC) ship temporarily to settle with his family in the United Arab Emirates. The ex-Zimbabwe captain, however, insists he will be back soon as he explores the option of commuting back and forth to join his teammates both...
Cremer 60 percent loading 6 January 2019 HARARE - Ex-Zimbabwe cricket captain Graeme Cremer is itching for a quick return to the national fold following a successful surgery on a knee injury that had relegated him to the bench since the team's World Cup Qualifiers debacle at home in March last year. The 32-year-old leg-spinner playi...
Zim umpire's stock rises 22 November 2018 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) umpire Langton Rusere's stock continues to rise after he was selected to officiate at today's ICC Women's World Twenty20 semi-final between West Indies and Australia. The Zimbabwe Women's cricket team failed to qualify for the finals which are being hosted by the...
ZC in HPSL relegation fight 10 November 2018 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) registered their second win in as many matches to put their fight against relegation from the Harare Professional Soccer League (HPSL) a gear up following a 0-1 victory over Edgars Stores at Greendale Sports Club last weekend. ZC moved into 18th place on the log ...
Zim on cloud nine 8 November 2018 HARARE - The Zimbabwe cricket team is over the moon following the 151-run victory over Bangladesh in the first Test in Sylhet on Tuesday afternoon. This was Zimbabwe's first win in red ball cricket in five years and the side's first away victory in 17 years. After losing all their matches i...
Zim cricketers in Mzansi T20 league 18 October 2018 HARARE - Zimbabwean cricketers Sikanda Raza, Sean Williams and Brandon Mavuta were part of the draft for Cricket South Africa's (CSA) new six-franchise competition, the Mzansi Super League launched yesterday. This is a new international T20 competition which comes to replace the failed T20 Glo...
Cremer itches for return 11 October 2018 HARARE - Leg-spinner Graeme Cremer is itching for a return to national duty as he begins his rehabilitation following a successful knee surgery last month. The former Zimbabwe captain said he is happy with his recovery path and is hopeful he would have enough time to recover and be a late incl...
ZC in Raza climb-down 27 September 2018 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) has made a progressive U-turn by including all-rounder Sikandar Raza in the squad for next month's tour of Bangladesh. The star batsman and off-spinner was denied a central contract and was not included on the roster for the tours of South Africa and Bangladesh a...
ZC's journey into the wilderness 25 September 2018 HARARE - Zimbabwe national cricket team departs tomorrow for a whirlwind journey into the wilderness of international cricket that will see them fulfil a limited overs series against neighbouring South Africa before proceeding to the subcontinent for another limited overs engagement and a two-mat...
Cricket stars inspire team with disabilities 25 September 2018 HARARE - Judging by the reception the Zimbabwe National Cricket (ZC) team got during their tour of the National Rehabilitation Centre (NRC) in Ruwa last week, there is no doubt team captain Hamilton Masakadza remains a popular figure in local cricket circles. The Zimbabwe Cricket team took tim...
Raza, ZC in dialogue 11 September 2018 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) and star player Sikandar Raza appear to be finding each other again in the aftermath of a minor fallout that saw both parties washing their dirty linen in public recently. Raza has been one of the few success stories on the local front and leading exemplary on th...
ICC throws Zim Cricket lifeline 8 September 2018 HARARE - The International Cricket Council gave Zimbabwe Cricket (ZC) another chance to put their house in order subsequently saving the country from imminent suspension despite pressure from other member countries to act. Getting kicked out by the ICC would have spelt doom for the local game ...
Rajput lauds players' attitude 6 September 2018 HARARE - Newly-appointed Zimbabwe Cricket coach Lalchand Rajput has lauded national team players' attitude and commitment towards the game adding that it has made his role as substantive gaffer relatively much easier. The former Afghanistan mentor credited for bringing about the Asian side's T...
Cremer undergoes knee surgery 25 August 2018 HARARE - Immediate-past ex-Zimbabwe cricket captain Graeme Cremer went through a successful knee surgery in Harare on Thursday. The 31-year-old leg-spinner is set to miss the country's scheduled tours to South Africa and Bangladesh in September but is optimistic of joining the team for the Ban...
ZC braces for tough times 15 August 2018 HARARE - Anguish is expected to ensue as struggling Zimbabwe Cricket (ZC) have confirmed a massive restructuring exercise that will see almost all staff contracts ending this month not being renewed owing to financial constraints. ZC hit rock bottom after they failed to pay staff salaries and ...
ZC board must be crazy: Mangongo 24 July 2018 HARARE - Former Zimbabwe U19 coach Stephen Mangongo, pictured below, believes the Zimbabwe Cricket (ZC) board is “crazy” in the aftermath of the 5-0 ODI series whitewash against Pakistan in Bulawayo. Zimbabwe were so poor during the series as they missed a number of their senior players, who o...
Zim in poor start 14 July 2018 BULAWAYO - The Zimbabwe cricket team got their ODI series against Pakistan to a bad start after they were bowled all out for a paltry 107 runs and lost by 201 runs in the opening match here yesterday. Pakistan opener Imam-ul-Haq scored a career best 128 off 134 deliveries to help the visitors ...
Zim crash out of tri-series 5 July 2018 HARARE - An improved Zimbabwe cricket team crashed out of the ongoing Twenty20 triangular series after going down by seven wickets in their third match against Pakistan here yesterday. The hosts' final round-robin match against Australia tomorrow will only be of academic interest as they can n...
Aussies wallop hapless Zimbabwe 4 July 2018 HARARE - Australia broke a number of records on their way to an easy 100-run win over struggling hosts Zimbabwe in the ongoing Twenty20 triangular series yesterday. The Baggy Greens' merciless skipper Aaron Finch led from the front with a career best 172 which is now the second highest individ...
Aussies back in business 3 July 2018 HARARE - Australia put aside struggles from their tour of England by expertly dispatching the number one-ranked Twenty20 side Pakistan by nine-wickets in the second match of the triangular series yesterday. It was just the tonic the Australians needed to forget about their tour of England wher...
Musakanda stars in Zim defeat 2 July 2018 Match Summary: Zimbabwe 108 all out (17.5 overs) - Tarisai Musakanda 43 (35), Solomon Mire 27 (29) Mohammad Hafeez 2-3 (0.5 overs), Mohammad Nawaz 2-11 (4), Usman Khan 2-11 (3), Hasan Ali 2-19 (2) Pakistan 182/4 (20 overs)- Fakhar Zaman 61 (40), Asaf Ali 41*(21), Shoaib Malik 37 (24), Tendai C...